Masaladi nemiriwo - Bezzia | Bezzia
ari masaladi nemiriwo Ivo kosi inobatsira kwazvo yekutanga muSpanish chikafu. Uye zvakare, nekuve nemhando dzakasiyana siyana, tinogona kugadzira nekugadzira akasiyana uye akasarudzika madhishi etafura yedu. Nechikonzero ichi, kuBezzia tinoda kupa nzvimbo kune izvi zvekudya, izvo zvine hutano uye zvine hutano hwakasimba hwehutano.
Masaladi nemiriwo chinhu chakakosha sosi yemvura, zvicherwa, mavitamini, fiber uye nekuteedzera zvinhu. Uye zvakare, kuumbwa kwayo nemipiro yayo hazvitamburwe nekuda kwekuita kwekupisa kwekubika uye izvi zvinopa mabhenefiti akakura.
Muchikamu chedu chakatsaurirwa kumabikirwo masaladi nemiriwo Iwe unowana nzira dzakasiyana siyana dzekugadzirira, kunyangwe chinhu chakanaka pane idzi dzekutanga kosi sarudzo ndechekuti zviri nyore uye zviri nyore kugadzira.
Bhinzi dzakasvibirira neham pane manhanga puree
kubudikidza Maria vazquez inoita 2 mazuva .
Bhinzi dzakasvibira pamwe neham chikafu chetsika icho vazhinji vedu takabika. Nhasi, zvakadaro, tinozviita nekupa ...
KuBezzia tinoda chaizvo maQuichés. Aya makeke anonaka anoita kunge isu imwe nzira yakanaka sekutanga kana tiine vaenzi, ...
Alboronia, amai venzira dzese
Iyo alboronia, ivo vanodaro, ndivo mai vemapistos ese. Chikafu chetsika chaimbogocha neChishanu mu ...
Mangani mapikicha ane zucchini atakaronga zhizha rino? Uye nhasi tinowedzera imwezve kubhuku redu reresipi, aya mazai akatswanywa ne ...
Peach, avocado uye salmon saladi
Dzimwe nguva hausarudze zvekubika. Mamiriro ezvinhu anosungira uye chimwe, zviviri kana zvitatu zvigadzirwa zvoda kukandwa ...
Aubergines pamwe nemadomasi a la Provençal
Zucchini yakaita basa rakakura mumabikirwo edu mwedzi uno. Asi haisiriyo wega mwaka wemiriwo ...
Zukini yakakangwa ne crispy chickpeas uye tahini muto
Iwe urikuda kudanana neiyi yekubika! Iyi ndiro ye zukini yakakangwa ine nhunyu dzinotsemuka uye girafu ...
Tomato, ham uye peach saladi
Iyo gadheni irikuve nerupo nematomatisi uye nehukuru hwayo izvo zviri kutitendera kuti tinakirwe nayo ...
Hake fillets pane zucchini cream
Kune ndiro dzakadai seaya chiuno chiuno pane zucchini kirimu zviri nyore kwazvo kugadzirira uye kubudirira kwazvo ...
Zucchini yakaiswa ratatouille uye huku
NeSvondo takagovana newe mabikirwo ehuku nemaarumondi, unozvirangarira here? Nhasi, tinokurudzira dzimwe nzira, senge iyo, ...
Chickpea uye karoti saladhi
kubudikidza Maria vazquez inoita 4 mwedzi .
Mamiriro ekunze akanaka anotikoka kuti tigadzire zvirongwa zvekunakidzwa nazvo pamhenderekedzo, makomo kana ...